08 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ 8 2019
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သစ်ကိုပညာသင်နှစ်၏အစအဦး၏အဆုံးသတ်နှင့် Express ကိုမှ Samsun SAMULAŞနွေရာသီကာလ, ကြေငြာခဲ့သည်တနင်္လာနေ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအလေ့အကျင့်၏ဆောင်းရာသီကာလတောင်တက်နာရီအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် Ring ကို Terminal နှင့်ဘတ်စ်ကား Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Project မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးထားမယ်လို့ [ပို ... ]
4 400 တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား SILEO တစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူအလုပ်ချိန်နာရီတာဝန်ခံကီလိုမီတာ။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ် Bozanka အားဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, ဖော်ရွေတိတ်ဆိတ်, ထိရောက်နှင့်သုညထုတ်လွှတ်ဂုဏ်သတ္တိများ SILEO သည့် Fore လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ၏မျိုးဆက်သစ်, [ပို ... ]
တနင်္လာနေ့စတင်မည်ဖြစ်သော Manisa မြူနီစီပယ်, စက်တင်ဘာလ92019-2020 ယင်းပညာသင်နှစ်တွင်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလယ်ပြင်၌အစီအမံများကိုယူ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အောင်မြင်မှုဆန္ဒကိုအားလုံးကျောင်းသားများအဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်သမ္မတဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Manisa မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန [ပို ... ]
သင်တန်းတစ်နှစ်ယူဆောင်ရွက်မှုများကိုရှင်းပြအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) 2019-2020 ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, ပထမဦးဆုံးနေ့ကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးတော်မူမည်လိုသူမိဘများကျောင်းသို့သယ်ဆောင်လိမ့်မယ်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးစွဲဖို့ကိုခေါ်နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအစ္စတန်ဘူလ်၏ညဉ့်အစေခံရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် Marmaray 24 နာရီအကြာတွင်လွှဲပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနထိတ်လန့်ခံစားခဲ့ရ! Marmaray နာရီ 24 ခဲ့ပါဘူး။ 24 နာရီပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောင်ပြီးနောက် IMM မြေအောက်ရထားသောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ [ပို ... ]
စက်တင်ဘာလ 10 အတွက်ကိစ္စတွင်çorluရထားဘေးအန္တရာယ်၏ဒုတိယကြားနာÇorluအရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာတွင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ Pre-ရုံးတင်စစ်ဆေးရှေ့နေတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားmüştekiဆုံးဖြတ်ချက်များအရှိဆုံး3ကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်။ Mürselရှေ့နေကရဲ "ကဆုံးဖြတ်ချက်Ündarအယူခံမယ်လို့ဆိုပါတယ် [ပို ... ]
3 စစ်အုပ်စုလည်ပတ်-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခံရဖို့ကြီးမားတဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းကြောင်း3ပုံပြင်ဘယ်မှာလဲ? မြို့ရွာနှင့်ခေတ္တဘယ်မှာ3ကြမ်းပြင်အကြီးစားအစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုအဘယျသို့3ကြမ်းပြင်အကြီးစားအစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအား? ရှိပါသလဲ3Storey မှတဆင့်ပြေးရသော [ပို ... ]
သမိုင်းစက်တင်ဘာလ 8 1932 ရထားလမ်းကျောင်းအတွက်ယနေ့တွင်ပိတ်ထားခဲ့သည်။ 8 စက်တင်ဘာလ 2017 Tepeköy-လိုင်း Selcuk İZBANဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim နှင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan ပါဝင်မီးရထားသတင်းများနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်အလားတူအခြားအ haberlertarih အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းငှါ [ပို ... ]